तीव्र छवि गोरमेट तातो / चिसो शिप्पर निर्देशन पुस्तिका - म्यानुअल
तीव्र छवि Gourmet तातो / चिसो Whipper निर्देशन पुस्तिका
पोस्टfazlul नोभेम्बर 21, 2020 नोभेम्बर 21, 2020 टिप्पणी छोड्नुहोस् तीव्र छवि गोरमेट तातो / चिसो शिप्पर निर्देशन पुस्तिका
घर » तीव्र छवि » तीव्र छवि Gourmet तातो / चिसो Whipper निर्देशन पुस्तिका
गउरमेट तातो / चिसो श्पर
शार्पर इमेज गउरमेट तातो वा चिसो हिपर खरीदको लागि धन्यबाद। हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईको खरीदमा तपाई खुशी हुनुहुन्छ। कृपया यो गाइड पढ्नको लागि केहि समय लिनुहोस् र यसलाई भविष्यको सन्दर्भको लागि भण्डार गर्नुहोस्।
3 भागहरूको पहिचान
4 पहिले प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले
5 GOURMET हट वा कप्पल WHIPPER प्रयोग गर्दै
6 सफा निर्देशनहरू
7 सुरक्षा चेतावनी
7.1 सम्बन्धित मैन्युअलहरू
तपाईंको गउरमेट तातो वा चिसो शिप्पर एक बहुमुखी किचन उपकरण हो जुन तातो र चिसो खानाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब तातो प्रयोग गरिएको छ, यसले ससाना र क्रीमयुक्त एस्पुमा (फोम) बनाउन सक्छ गोरमेट-शैली साइड डिशहरूमा जस्तै ह्वाप्ड आलुहरू र मकैको फोम। चिसो प्रयोग गर्दा, यो व्हीप्ड क्रीम, व्हीप्ड चकलेट, दही एस्पुमा, फ्रुस्टि,, पेस्ट्री क्रूम, फल फोम र अन्य मिठाई तोपिंगहरूका लागि उत्तम हो।
हल्का र टिकाऊ एल्युमिनियम निर्माण
ठूलो १-पिन्ट (ml०० मिलि) क्षमता
Stain स्टेनलेस स्टील डेकोरेटर नोजल समावेश गर्दछ
नोजल सफाई ब्रश समावेश गर्दछ
तातो वा चिसो कोरिएको क्रीम, फोम र एस्पुमा बनाउँदछ
सबै मानक--ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड (N8O) चार्जर (चार्जर समावेश छैन) को साथ उपयुक्त
D. नोजल एडाप्टर
E. स्टेनलेस स्टील ट्यूलिप सजाउने नोक
F. स्टेनलेस स्टील सिधा सजावट नोक
G. इनलेट भल्भ
H. स्टेनलेस स्टीलको साँघुरो सजाउने नोजल
I. चार्जर होल्डर
नोजल सफा ब्रश (देखाइएको छैन)
NOTE: यस उपकरणलाई मानक--ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड (N8O) चार्जर को उपयोग आवश्यक छ। यी धेरै ठूला सुपरमार्केट र रेस्टुरेन्ट आपूर्ति स्टोरबाट किन्न सकिन्छ।
पहिले प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले
अनस्क्रु गर्नुहोस् र राम्रोसँग तपाईंको गउरमेट तातो वा चिसो शिप्परको सबै भागहरू न्यानो पानी र डिश साबुनले सफा गर्नुहोस्। हामी यस उपकरणलाई डिश वाशरमा सफा गर्न सिफारिस गर्दैनौं, किनकि यसले क्यान्टर वा टाउको बिगार्न सक्छ। सजाइएको नोजलहरू सफा गर्न समावेश गरिएको नोक ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्। प्रयोग गर्नु अघि सबै भागहरू हावामा अनुमति दिनुहोस्।
GOURMET हट वा कप्पल WHIPPER प्रयोग गर्दै
क्यानिस्टर तापमान बढाउनुहोस् वा कम गर्नुहोस्
उत्तम परिणामहरूका लागि तपाईंले डब्बीलाई तताउन वा चिल गर्नै पर्छ। यो गर्नका लागि कनसिटरलाई तातो वा चिसो पानीले भर्नुहोस् र यसलाई केही मिनेट बस्नुहोस्। तपाईंको सामग्रीहरू थप्नु अघि पानी खाली गर्नुहोस्।
क्यान्सरमा मिश्रण थप गर्नुहोस् [FIG। १]
राम्रोसँग चिसो ताजा ह्वाइप क्रीम र / वा अन्य सामग्री नुस्खामा निर्भर गर्नुहोस्। कन्सिटरलाई लगभग २/2 क्षमतामा भर्नुहोस्, किनकि सामग्री दबाबमा विस्तार हुन्छ। ओभरफिल नलगाउनुहोस्। रेसिपीहरू तयार गर्दा, ग्रेन्युलेटेड नुन वा चिनी वा अन्य पाउडर सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा दूध, क्रीम वा पानीमा विघटन गर्नुपर्दछ उपकरण भर्नबाट जोगिनका लागि। मिठाईको लागि, पाउडर चिनी वा तरल मीठो प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। कुनै ठोस पदार्थ जस्तै फलफूल, तरकारीहरू र मोटा मसलाहरू शुद्ध गर्नुपर्नेछ र डब्बीमा खसाल्नु अघि राम्रो सेभमा पार गर्नुपर्नेछ।
हेड [FIG लाई भेला गर्नुहोस्। २]
टाउको र क्यान्डरको बीचमा रहेको ठूलो गस्केट पत्ता लगाउनुहोस्। गासकेटलाई टाउको भित्र राख्नुहोस् र टाउकोको भाँडामा समान र दृढताका साथ पेच गर्नुहोस्। टाउको सही ठाउँमा छ जब कुनै धागा देखा पर्दैन। क्रस-थ्रेड नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ थ्रेडि find फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, टाउको हटाउनुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
एक चार्जर घुसाउनुहोस् [FIG। ]]
एक--ग्राम नाइट्रस अक्साइड (N8O) चार्जर चार्जरमा राख्नुहोस्। केवल नयाँ, उच्च-गुणवत्ताको ह्विप क्रीम चार्जर प्रयोग गर्नुहोस्। (सोडा मेसिनको लागि CO2 चार्जर प्रयोग नगर्नुहोस्।)
क्यानिस्टरलाई चार्ज गर्नुहोस् [FIG। ]]
चार्जर होल्डरमा इनलेट वाल्वमा स्क्रु गर्नुहोस् चार्जर सामग्री पूर्ण हिसाइ sound्ग ध्वनिको साथ जारी नभएसम्म प्रत्येक रेसिपीका लागि १ चार्जर प्रयोग गर्नुहोस् अन्यथा तोकिए सम्म। यस उपकरणमा एकै चोटि कहिले पनि २ भन्दा बढी चार्जर प्रयोग नगर्नुहोस्।
ठाडो दिशात hi देखि times पटक हिप्पर चलाउनुहोस्। (राम्रोसँग चिस्याइएको लाइट क्रीम वा अन्य मिश्रण प्रयोग गर्दा, १० पटक सम्म हिलाउनुहोस्।) त्यसपछि चार्जर होल्डर खोल्नुहोस्। अनस्क्रुभ गर्दा प्रकाश हिसिंग आवाज सामान्य छ। स्थानीय नियमहरु अनुसार खाली इस्पात चार्जर हटाउनुहोस् र रिसायकल गर्नुहोस्।
NOTE: क्यान्स्टरलाई “ओभर हिलाउनुहोस्” नगर्नुहोस्, किनकि यसले क्रीमलाई वास्तवमै कडा बनाउन सक्छ। धेरै आन्दोलनले बटर सिर्जना गर्न सक्दछ। यद्यपि, यदि व्हीप्ड क्रीम पर्याप्त फर्ममा छैन भने, फेरि एकपटक हल्लाउनुहोस्। पछि प्रयोग गर्दा, फेरि नचल्नुहोस्।
श्वासित क्रीम डिस्पनेस गर्दैछ [FIG। ]]
नोजल एडाप्टरमा तपाइँको इच्छित प्रभाव प्राप्त गर्न सजावटको नोक संलग्न गर्नुहोस्। पठाउनको लागि, व्हिपर ठाडो गरी समात्नुहोस् (सजावटको नोजलले तलतिर औंल्याएको) सतहबाट १ इन्च माथि। सजाउनको लागि, लीभरलाई डिप्रेस गर्नुहोस्। यसले भल्भ खोल्छ र क्रीमलाई बाहिर निस्कन दिनेछ। वितरण पछि तुरुन्त सेवा गर्नुहोस्।
विप्ड क्रीम भण्डार गर्दै
यदि तपाईंले डब्बाको सम्पूर्ण सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईं भविष्यको प्रयोगको लागि बचत गर्न सक्नुहुनेछ। कोरिएको क्रीम धेरै दिनको लागि फ्रिजमा ताजा रहनेछ। यद्यपि हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले नोजल एडाप्टरबाट सजावटको नोक हटाउनुहोस्, यसलाई राम्ररी पखाल्नुहोस् र फेरि फिर्ता राख्नुहोस्। यस तरिकाले, सजाउने नोजल सफा र अर्को प्रयोगको लागि तयार हुनेछ। महत्वपूर्ण: सँधै आफ्नो गउरमेट तातो वा चिसो शिप फ्रिजमा राख्नुहोस् (फ्रिजरमा कहिले पनि हुँदैन)।
महत्वपूर्ण: टाउको हटाउनु अघि, बाँचेको दबाब लीभरलाई निराश गरेर उम्कन दिनुहोस्।
जब तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ सबै दबाव हटाईन्छ, टाउकोबाट स्क्रुभ गर्नुहोस् र ग्यास्केट र सजावटको नोक हटाउनुहोस्। अर्को हातले नोजल एडाप्टर खोल्दा टाउको भित्र भल्भको अन्त्य समात्नुहोस्।
हल्का डिश डिटर्जेंट र ब्रशको साथ प्रत्येक व्यक्तिगत कम्पोनेन्ट राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्। डिशवाशरमा कुनै पनि भागहरू नधोउनुहोस् किनभने यसले कम्पोनेन्टहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। यो उपकरण सफा गर्न धारिलो वस्तुहरू वा घर्षण सामग्री प्रयोग नगर्नुहोस्।
सबै भागहरू राम्रोसँग सुक्नको लागि अनुमति दिनुहोस्। उपकरण पृथक गर्नुहोस्।
गोरमेट तातो वा चिसो व्हिपर फ्रिजरमा नहेर्नुहोस्।
चरम तातो (स्टोभ, प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश, माइक्रोवेव, आदि) मा Gourmet तातो वा चिसो Whipper बेनकाउन नगर्नुहोस्।
सबै प्रेस जारी नभएसम्म गउरमेट तातो वा चिसो श्वापरको टाउको खोल्नुहोस्। यो गर्नका लागि लीभर थिच्नुहोस् सबै हिसाब आवाज बन्द नभएसम्म
यी निर्देशनहरू अनुसार प्रत्येक प्रयोग पछि गोर्मेट तातो वा चिसो श्परलाई सफा गर्नुहोस्।
गउरमेट तातो वा चिसो शिप्पर सजिलो सम्मेलन र प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। यस उपकरणलाई भेला गर्न वा प्रयोग गर्न कहिले पनि बल प्रयोग नगर्नुहोस्।
क्यान्स्टर चार्ज गर्नुहोस् FIG मा देखाइए जस्तै। New. केवल सम्मानित स्रोतबाट नयाँ,--ग्राम नाइट्रस अक्साइड (N4O) चार्जरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। सोडा मेशिनका लागि कार्बन डाइअक्साइड (CO8) चार्जर प्रयोग नगर्नुहोस्।
यस उपकरणमा एक पटकमा २ भन्दा बढी चार्जर प्रयोग नगर्नुहोस्।
यदि सामग्रीहरू वितरण गर्दैनन् भने, उपकरण भर्न सकिन्छ। यो दबाब भएको छ जब टाउको लुकाउन को लागी नगर्नुहोस्। काउन्टरटपमा गोरमेट तातो वा चिसो श्पर राख्नुहोस् र सामग्रीहरू तल नबढुन्जेल कुर्नुहोस्। त्यसो भए, टाउकोलाई बाक्लो कपडाले ढाक्नुहोस् र लीभर धेरै पटक थिच्नुहोस् जबसम्म सबै प्रेशर पूर्ण रूपमा नहुन सक्छन्। ग्यास निसके पछि, सावधानीपूर्वक टाउको काट्नुहोस्।
यस उपकरणलाई परिमार्जन वा मर्मत गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै उपयोगकर्ता-सेवा योग्य भागहरू छैनन्। यस उपकरणका साथ अन्य ह्विपरबाट भागहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
यो उपकरण वयस्कको उपयोगको लागि मात्र हो। यस उपकरण र नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) चार्जरहरू जहिले पनि बच्चाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
यस यन्त्रलाई यसको उद्देश्ययुक्त बाहेक अरू केहि प्रयोग नगर्नुहोस्।
यदि यो बिग्रिएको देखिन्छ भने यस उपकरणको प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि यो बिग्रिएको अवस्थामा प्राप्त भयो भने, द्रुत छवि ग्राहक सेवालाई तुरुन्तै विस्थापनको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
भविष्यको सन्दर्भको लागि यस प्रयोगकर्ताको मार्गनिर्देशन राख्नुहोस्।
वारेन्टी / ग्राहक सेवा
तीव्र छवि ब्रान्डेड आईटमहरू शार्पर आईमेक्स.क. बाट खरीद गरिएको १ बर्षे सीमित प्रतिस्थापन वारेन्टी सामिल छ। यदि तपाईंसँग यस गाइडमा कुनै प्रश्नहरू समावेश गरिएको छैन भने, कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा विभाग कल गर्नुहोस् १ (1) २१०-1।। ग्राहक सेवा एजेन्टहरू सोमबार देखि शुक्रवार सम्म, बिहान :877: ०० देखि साँझ 210:०० बजे सम्म ET उपलब्ध छन्।
तीव्र छवि तातो / चिसो पीडा-मुक्त जेल मोजा निर्देशन र सफा म्यानुअल आइटम नम्बर २०205004 शार्पर इमेज हटको खरीदको लागि धन्यबाद ...
तीव्र छवि विसारक निर्देश पुस्तिका तीव्र छवि अल्ट्रासोनिक अरोमाथेरापी विसारक प्रयोगकर्ता मार्गनिर्देशन र सफाई निर्देशनहरू ...
तीव्र छवि क्लिप-मा माइक्रोस्कोप निर्देशन पुस्तिका शार्पर छवि- क्लिप-मा माइक्रोस्कोप ब्याट्री: क्लिप-मा माइक्रोस्कोप3प्रयोग गर्दछ ...
तीव्र छवि चाकू Sharpener निर्देशन उपयोगकर्ता पुस्तिका प्रयोगकर्ता मैनुअल शार्प छवि पेशेवर छनौट गर्नुभएकोमा धन्यवाद ...
तीव्र छवि इलेक्ट्रिक Smores निर्माता निर्देश पुस्तिका प्रयोगकर्ता मैनुअल शार्प छवि स्टीयरिंग खरीदको लागि धन्यबाद ...
तीव्र छवि युनिभर्सल ट्राभल एडाप्टर निर्देशन पुस्तिका साझा छवि- युनिभर्सल यात्रा एडाप्टर आइटम नम्बर २०206896 No. XNUMX XNUMX धन्यबाद ...
पोस्टfazlul नोभेम्बर 21, 2020 नोभेम्बर 21, 2020 पोस्टतीव्र छविटैग: 207556, तीव्र छवि, हप्पर
खुल्ला--उपकरण युनिभर्सल रिमोट प्रयोगकर्ता गाइड
आन्कर युफी मोशन सेन्सर प्रयोगकर्ता मैन्युअल
फोर्जिंग माउन्ट लामो आर्म टिभी वाल माउन्ट प्रयोगकर्ता गाइड
JBL विस्तार मॉनिटर मास्टर मॉनिटर subwoofers उपयोगकर्ता गाइड
tp-लिंक अप्रबन्धित PoE + स्विच प्रयोगकर्ता म्यानुअल
क्यूबटेक ब्लुटुथ ट्रान्समिटर र रिसीभर २ मा १ उपयोगकर्ता पुस्तिका
लेनोवो थिंकविजन फ्लैट प्यानल मोनिटर प्रयोगकर्ता मार्गनिर्देशन
एंजेलिका कारान्डांग on JBL सहनशीलता पीक द्वितीय मैन्युअल
क्यारोल on Skullcandy इन्डी ईन्धन Earbuds उपयोगकर्ता पुस्तिका
करेन बे on शार्क नेभिगेटर लिफ्ट-अउ डिलक्स NV360 श्रृंखला उपयोगकर्ता पुस्तिका
जेनेसा on ब्ल्याकवेब वायरलेस ईरफ़ोन म्यानुअल
डान्ट on आन्कर साउन्डकोर लाइफ पी २ प्रयोगकर्ता म्यानुअल
म्यानुअलहरू +, गर्व WordPress द्वारा संचालित।